Flat Pack Weelka House-saareyaasha & Shirkado - Shiinaha Flat Pack Weelka House Factory
40Ft Raaxada 2Guryaha Weelka Guryaha Weelka Prefab Flat Pack Weelka Guryaha
1.Flat pack Container house 1.Waxaa lagu sameeyay dabaqa hore, gidaarka, saqafka iyo qalabka guriga 2. Waxaa loo adeegsadaa qolka kulanka, hoyga, musqusha, maqaayada, keydinta, gawaadhida guryaha loo yaqaan '3. Port House' Waqtiga dhismaha oo kooban isla markaana keyd u samee shaqaale badan 5. Hal guri oo 6 * 2m ah waxaa dhisi kara 2 shaqaale 30 daqiiqo gudahood. 6.Save xamuul dheeri ah, hal weel 40ft ayaa qaadi kara 8 cutub 7.Save space, Waxaa lagu laaban karaa keydka marka aan la adeegsan. 8.Can waxaa loo isticmaali karaa wareeg ahaan fadhi kala duwan ...
Qiimaha Warshadda Weelka Weelka Si Weyn Loogu Uruuriyay Guriga Labada Jibaar Jiifka ah Prefab
1.Flat pack Container house Guriga weelka baakadka ee flat flat wuxuu bixiyaa xalal aan xad lahayn oo ku saabsan goobaha ganacsiga, guryaha qaybsan, militariga ama codsiyada caafimaadka, hoyga masiibooyinka dabiiciga ah ama horumarinta dhacdooyinka dalxiis, dhaqan ama waxbarasho. Qeexitaanka Sheyga Sheegida birta bannaanka ： 5950mm * 3000mm * 2800mm Inner ： 5800mm * 2800mm * 2500mm Bolts isku xirka iyo alxanka alxanka 0.45ppgi galaaska dhogorta galaaska 40kg / m3 celing panel 0.45ppgi cust ...
Flat Pack Weelka Guryaha Dhismaha Makhaayadaha Qaybsan Prefab Shipping Weelka House Mobile House